खोला तर्दा पल्टियो मन्त्री महासेठको गाडी !!! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खोला तर्दा पल्टियो मन्त्री महासेठको गाडी !!!
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ सवार गाडी खोलामा पल्टिएको छ ! मन्त्री महासेठ सवार बा २ झ ४०२९ नम्बरको गाडी स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी–३ स्थित घट्टे दरौ खोलामा पल्टिएको हो ।
सहरे खोला पुलको शिलान्यास गरी फर्कने क्रममा मन्त्री सवार गाडी खोलामा पल्टिएको हो ! दरौ खोलामा पुल नभएको र खोला तर्ने क्रममा उनी सवार गाडी खोलामा पल्टिएको हो । गाडी आधा मात्र खोलामा पल्टिएको हो , घटनामा मन्त्री महासेठ भने सकुशल छन् , गाडी पल्टिएपछि उनलाई सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकालेका थिए । डुबेको गाडी पनि क्रेनले निकालेको छ ।
Other News: सुडानमा शान्ति वार्ताका लागि दुबै पक्ष तयार
लामो राजनीतिक अन्योलमा परेको सुडानमा सहमतिको निम्ति छिट्टै पुनः वार्ता गर्न प्रदर्शनकारी र सैनिक नेतृत्व तयार भएका छन् । एक इथियोपियाली मध्यस्थकर्ताले यो जानकारी दिएका हुन् । विपक्षी गठबन्धनले नागरिक अवज्ञा र आमहडताल रोक्न सहमति जनाएको छ । लामो समयदेखि राष्ट्रपति रहेका ओमार अल बशिर एप्रिलमा अपदस्थ गरिएपछि सेनाले सत्ता हातमा लिएको छ । राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न सेना तयार भएको इथियोपियाका विशेष दूत मोहम्मुद दिरिरले संवाददाताहरूलाई जानकारी दिए । प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीहरूले नागरिक सरकार पुनस्र्थापना गर्न माग गरिरहेका छन् ।
जुन महिनाको ३ तारिखमा धर्ना अन्त्य गर्न गरिएको सुरक्षा कारबाहीमा दर्जनौँको संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएपछि वार्ता भङ्ग भएको थियो । त्यसपछि विपक्षीले घोषणा गरेको अनिश्चितकालीन हडतालका कारण देशका अधिकांश भाग प्रभावित भएका थिए । चिकित्सकहरूले पछिल्लो हिंसा हुँदा ११८ जना मारिएको जानकारी दिएका थिए । तर सैन्य अधिकारीहरूले ६१ जनाको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् । त्यसपछि अधिकांश व्यवसाय ठप्प भए र सेनाले सुडानका सडकमा गस्ती गर्न थाल्यो । डिसी नेपाल
यस्तो झुपडीमा पढेर पनि देशभरिका १५ हजार प्रतिस्प्रधीलाई उछिन्दै एमबीबीएसमा १ नम्बरमा नाम निकाल्ने यी हुन् प्रतिमा
रोजन पाण्डे बने सबै भन्दा बढीअंक ल्याउने बिधार्थी !
महानगरका सडकमा जताततै फोहोर